Maitiro ekufona nenhamba yakavanzwa pane iPhone | IPhone nhau
Kubva zvinokatyamadza zveNSA, vashandisi vakatarisa zvakanyanya kuvanzika kwedu. Pane zvirinani, isu tine hanya zvakanyanya nezvekuchengeta kwedu zvakavanzika dhata zvakavanzika. Dzimwe nguva tinotora matanho, sekushandura email kana internet yekutsvaga injini. Imwe nhanho yatinogona kutora ndeye vigai nhamba yedu yefoni kuitira kuti chete iwo maonana atinoda ngaazvione (kana kuita isinganzwisisike joke, iyo yandinoziva kuti mumwe munhu anenge achifunga nezvayo izvozvi).
Kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, iwe uri kufunga nezvazvo maitiro ekuvanza nhamba yedu yefoni kana iwe uchifona kubva ku iPhone yako, unofanirwa kuziva kuti, semune chero mudziyo wekufona, unogona. Ehezve, zvinoenderana neako opareta, zvichaitwa neimwe nzira kana imwe, kunyangwe paine yakajairika iyo inoshanda kune vese.
Asi chinhu chimwe chinofanira kutakurwa mupfungwa: patinovanza kufona, hatisi kunyatso kuviga zvachose, rega nditsanangure: kana tikadaidza hama yedu Pepe kana kona rekona, patinovafonera havazokwanise ona ari kuvadana. Asi kana tikasheedza, semuenzaniso, mapurisa, ivo vanozogona kuona kuti ndeipi nhamba iri kufona. Zvakare, chero anozviremekedza mubiridzi anogona kuona nhamba yedu, asi iyi inenge yatove nyaya yakanyanyisa. Pazasi pauinazvo izvo iwe zvaunoda kuziva nezve dzakavanzika nhamba.
1 Maitiro ekuvanza iyo nhamba pane iPhone
2 Nhamba yakavanzwa inogona kuvharwa here?
Maitiro ekuvanza iyo nhamba pane iPhone
heyi vashandisi vanofambisa maitiro kupfuura vamwe. Nevafambisi ava, kuviga nhamba yedu kunonzwisisika, sezvo zvichingodiwa chete kuti ufambe kuburikidza nezvirongwa uye uwane sarudzo. Kana iwe uine imwe yemakambani aya uye iwe usiri kuda kutsvaga iyo sarudzo iwe pachako, iwe unofanira kungotevera matanho aya:
Isu tinopinda muTerefoni.
Tevere, tinobata Ratidza ID yekufona.
Isu tichangoona switch, lever kana toogle. Tinoimisa kuitira kuti patinofona tione "yakavanzwa nhamba" kana "yekunze kufona". Ehezve, inofanirwa kutorwa mupfungwa kuti mamwe masevhisi anozogona kuiona.
Asi hazvisi nyore nguva dzose. Kana hongu, asi iwe unofanirwa kuziva kuviga sei nhamba yedu kana mudziyo wedu usinga tipe iyo sarudzo kubva kumasefa Kuvanza nhamba yedu, ngatizviitei kubva kuchinhu chatinochiita, isu tinofanirwa kutevedzera nhanho idzi:
Isu tinovhura iko kunyorera foni.
Isu tinowana iyo keyboard.
Isu tinosuma "# 31 #" isina makotesheni ari pamberi penhamba yatinoda kufonera. Semuenzaniso, kana nhamba yatiri kuda kufona iri 666777999, tinofanirwa kufona # 31 # 666777999 tobata chiratidzo chekufona.
Chinhu chakashata pamusoro pinda mairi ndeyekuti, kunze kwekunge tichizviziva nemusoro, isu tichafanirwa kuzvinyora kumwe kunhu. Chinhu chinonyanya kufadza kungave kuvhura ajenda, kuisa iyo faira rekutaurirana ratiri kuda kufonera (kana isu rakachengeterwa), tinya uye ubatise panhamba yavo kuti ukope iyo, vhura chinyorwa, nyora kodhi "# 31 # ", Namatidza iyo nhamba kumashure, teedzera zvese uye unamate mugomba panowoneka manhamba patinoamaka.
Nhamba yakavanzwa inogona kuvharwa here?
Hongu, asi nemapundu. iOS inosanganisira kubva kuIOS 7 mukana we block call. Izvi zvinogona kuuya zvinobatsira kune akawanda mamiriro, sekuvharira mumwe munhu watisingachade kuve naye chero rudzi rwekubatana kana kuvharira asina kukumbirwa kushambadzira mafoni ayo, kazhinji, anongodaidzira kukanganisa. Dambudziko neiyo iOS kufona blocker ndeyekuti haina kukwana, nekuti haitibvumidze kuvharidzira mafoni nenhamba yakavanzwa. Kana isu tichida kuvharidzira iyi mhando yekufona, isu tichafanirwa kuzviita neyechitatu-bato kunyorera.
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa maapplication eIOS ekuvharira manhamba akavanzika ndeye Call Bliss. Tinogona kutaura izvozvo Dana mufaro iko kunyorera kuisa nhamba pane yakasviba kuitira kuti vatadze kutifonera kana kutumira mameseji. Dambudziko nderekuti harisi rakachipa kwazvo application asi, sezvinhu zvese muhupenyu, zvichave zvakakosha kana rikasangana nezvatiri kutsvaga.
Fonera Bliss - Nyarara kusada kufona uye zvinyorwa10,99 €
Asi tisati tatenga chero kunyorera, chinhu chakanakisa chatingaite kutsvaga kana opareta wedu achitipa sevhisi yekuvharira idzi mhando dzekufona. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kushanyira yavo peji rewebhu rekutsigira uye tione kana paine sevhisi yekudzivirira mafoni. Kana tisingakwanise kuiwana pawebhu, tinogona kuvafonera uye vabvunze kana vachipa basa. Ehezve, chinowanzoitika chinhu ndechekuti sevhisi haina mahara, asi ine mutengo wemwedzi. Vashandisi vanowanzo kubhadharisa imwe mari paiyi invoice inozosiyana zvichienderana neanoshanda, asi kazhinji inodhura € 1.
Zvine musoro, kana tikadana anoshanda uye vakatiudza kuti vanopa sevhisi yemahara, iyi ndiyo inofanira kuve yekutanga sarudzo. Kana tikadana uye iwe ukatiudza kuti yako mutengo uri € 1 pamwedziIsu tinofanirwa kuziva kuti mugore tinobhadhara € 12, apo iko kunyorera kwekutanga kuchabhadharwa kamwe chete uye, kunze kwekunge kwabviswa muApp Store uye kwadzoreredzwa, tichakwanisa kuishandisa zvachose.
Ndeipi nzira yaunonyanya kufarira kushandisa pane yako iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekufona nenhamba yakavanzwa pa iPhone
anofona chaiye akasununguka
Ndatenda neruzivo, yakanaka kwazvo chinyorwa.
kune avo vanogona kushandisa cydia ini ndingakurudzira kufona inosimudzira, nekukurumidza uye kunyatsogadzikana.
Adolf ruzha akadaro
Hazvishande; Ndakaiyedza nekufonera musikana wangu uye ini ndinowana «Kanganiso mukufona»
Pindura Adolf Noise
Vamwe vashandisi vanogunun'una nezvematambudziko neSafari pane iOS 9.3 [YAKADZIDZWA]